Huawei Mate X: Nkọwapụta, ọnụahịa na ntinye ụlọ ọrụ | Gam akporosis
Izu ole na ole gara aga Huawei gosipụtara ọnụnọ ya na MWC 2019, kedu ebe ha ga-enwe mmemme ngosi. Akara ndị China bụ otu n'ime ihe na-adọrọ mmasị nke ihe omume na Barcelona. Dị ka a na-atụ anya ọtụtụ akụkọ n'aka gị, ọ bụ ezie na e nwere ngwaọrụ nke na - ewepụta mmasị pụrụ iche, nke bụ usoro mpịachi ya. Huawei Mate X, nke emesịrị mee ka ọ bụrụ ọkwa na mmemme ahụ.
Naanị ụnyaahụ e kpughere aha ngwaọrụ ahụ, ekele na posta. Agbanyeghị na ọ bụghị mgbe ihe ngosi a gosipụtara mgbe anyị nwere ike ịmata nkọwa nkọwa gbasara ama ama a. Anyị amaraworị nke a Huawei Mate X, nke pụtara ụbọchị ole na ole mgbe Samsung Galaxy N'ogige atụrụ.
O doro anya na ọnwa ole na ole ịpịpịa smartphones ga-abụ otu n'ime nnukwu ọnọdụ n'afọ a. Ugbu a, n'ime oghere izu anyị nwere ụdị abụọ kachasị mkpa na nke a. Ihe na-adọrọ mmasị banyere nke a Huawei Mate X bụ ika ahụ nzọ na usoro mpịachi dị iche na nke Samsung.
Nke a bụ ihe na - enye gị ohere ịnwe ngwaọrụ dị iche karịa nke akara Korea gosipụtara ụbọchị ole na ole gara aga. Ihe bụ ihe ọzọ, pụtara ìhè karịsịa maka ịbụ ezigbo mma, ihe n’enweghị ihe ịrụ ụka adịghị ya na nnweta dị mkpa n’ụdị ụdị ngwaọrụ a. Ya mere, anyị na-ahụ echiche dị iche, otu n’ime ihe na-atọ ụtọ ọ bụla.
1 Nkọwapụta Huawei Mate X
2 Huawei Mate X: Innovation dị ka ihe ngosi
Nkọwapụta Huawei Mate X
Dị ka atụrụ anya, na teknuzu larịị anyị bụ ndị n'elu niile a n'elu nke nso. Akara ndị China na-ahapụ anyị na ngwaọrụ zuru oke. Na ihe ngosi ha, ha choro imesi ike ohuru na imewe, mana n’achighi ileghara ihe o putara anya. N'ihi ya, ọ bụ a isi Nchikota na ngwaọrụ a. Na mgbakwunye, dịka ekwuolarị ọnwa ndị a, ọ bụkwa akara mbụ 5G nke ika ahụ. Nkọwapụta ya zuru ezu bụ:
Nka na ụzụ nkọwa Huawei Mate X
Nlereanya Mate X
Usoro njikwa Achịcha 9.0 Android na EMUI 9 dị ka oyi akwa
Ihuenyo 8 Inch nwere mkpebi nke pikselụ 3120 x 1440 (sentimita 6.39 apịaji na 6.6 sentimita na-apịaji)
Nhazi Kirin 980 na Balong 5000 dị ka modem
GPU Ogwe aka Mali-G76 MP10
Nchekwa n'ime 512 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 40 MP n'obosara obosara + 16 MP ultra wide angle + 8 MP telephoto
Igwe n'ihu Enweghị ihu igwefoto
Njikọ 5G Dual Sim Bluetooth 5.0 WiFi 802.11a / b / g / n / ac USB-C
Atụmatụ ndị ọzọ NFC mkpisiaka ihe mmetụta n'akụkụ
Batrị 4.500 mAh na 55W Huawei SuperCharge
Akụkụ Ọkpụrụkpụ 11mm apịaji (5.49mm emeghe)
Ibu ibu -
Ahịa 2299 euro
Huawei maara ihe ọ na-eji ekwentị a. Branddị ahụ na-abanye na nke mpempe akwụkwọ mpịachi na ihe nlereanya a, nke nwere ihuenyo 8-anụ ọhịa. Mgbe apịaji, bụrụ ama ama 6,39-anụ ọhịa, na ihuenyo nke abụọ dị ka ihe nkwado na azụ nke ngwaọrụ ahụ. Dịka e kwuru, ọkpụrụkpụ bụ akụkụ bụ isi nke ngwaọrụ ahụ. Nnọọ ebughibu maka ụdị igwe ndị a.
Mgbe ọ na-ekpughe, Huawei Mate X a na-ahapụ anyị na ihuenyo 8-anụ ọhịa. Na ihuenyo a, anyị anaghị ahụ ọkwa, oghere ma ọ bụ ihe ọ bụla. Yabụ, ọ bụrụ na etinyere ya kpamkpam, anyị enweghị igwefoto n'ihu na ngwaọrụ ahụ. Ga-apịaji ya ala tupu ị laghachite n'ọnọdụ a na-akpọ ọnọdụ ekwentị. A na-eji kamera azụ nke ngwaọrụ ahụ maka selfies ndị a na otu.
Huawei Mate X: Innovation dị ka ihe ngosi
Obi abụọ adịghị ya, usoro mpịachi abụwo ihe dị mkpa na ama ama a. O nwere ihe ruru 100 ngwungwu ma chọọ afọ atọ nke mmepe, iji hụ na ngwaọrụ nwere ike ịpịkọta onwe ya, n'emebighị ihuenyo ahụ. Mgbe apịaji, anyị nwere a Iju 11 millimita naanị 5,49 millimeters pụtara. N'ezie dị mma na nke a, nke doro anya na ọ bụụrụ ụlọ ọrụ ahụ ihe ịma aka.
Nnukwu ihuenyo nke Huawei Mate X na-enye ọtụtụ uru. Akara ahụ gosipụtara na ọ dị mfe ọgụgụ, yana ịbụ ezigbo maka ikiri vidiyo na ya. Ha choro imesi ike imepụta ihe eji gosiputa ngwa oru a. Na mgbakwunye, e nyere ndị ọrụ ike na-arụ ọrụ na gbawara n'etiti ihuenyo mode, nke na-enye ohere ka ọkara nke ihuenyo jiri na ihuenyo dị iche maka ụfọdụ ngwa. Ya mere, ọ bụkwa ezigbo ihe nlereanya iji rụọ ọrụ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ ekwentị mbụ nke ika ahụ nwere 5G. Maka ya, jiri modem Balong 5000 na Huawei webatara izu ole na ole gara aga. Dịka onye nhazi, ọ na-eji Kirin 980, nke kachasị ike nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ugbu a. Otu ihe ahụ anyị nwere na Nwunye 20 na 20 Pro nke ika ahụ. Mọdem a bụ ọrụ maka inye ngwaọrụ nnukwu ọsọ, rue 4,6 Gbps nke nbudata. Ọ bụ ezie na ọ dabere na ókèala. Mana ụlọ ọrụ ahụ ekwuola na nke a Huawei Mate X na-enye gị ohere ibudata ihe nkiri 3 GB na naanị 1 sekọnd.
Ọ na-abịa na batrị ikike 4.500 mAh. Ma ikekwe gịnị ihe kachasị dị egwu bụ ụgwọ ngwa ngwa ya, 55W. Ọ bụ ihe kasị dị ike ngwa ngwa ụgwọ na ahịa na nke a. Dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ngosi ahụ, ekwentị nwere ike ịgba ụgwọ site na 85% naanị na 30 nkeji. Gwọ a ngwa ngwa na-abịa n'okpuru aha Huawei SuperCharge.
Ozugbo a kọwara nkọwapụta nke Huawei Mate X a, oge eruola ịmata mgbe anyị ga-atụ anya na ọ ga-erute n'ụlọ ahịa ahụ, gbakwunye na ọnụahịa ọ ga-enwe. Ọ bụrụ na ngwaọrụ Samsung mechuru ọtụtụ ndị ọnụahịa ya dị elu, ọ ka ga-ahụ ihe akara ndị China
Ọfọn, na nke a, ihe ịtụnanya ga-adị ukwuu maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ebe ọ bụ na ọnụahịa nke Huawei Mate X a dị elu karịa ihe anyị hụrụ na ngwaọrụ Samsung. Dị ka a hụrụ na ngosipụta nke ngwaọrụ ahụ, ọ ga-abịa na ụdị nke nwere 8 GB nke RAM na 512 GB nke nchekwa dị n'ime, na ọnụahịa nke euro 2.299.
Mgbe a tọhapụrụ ya, na-atụ anya ịmalite ụlọ ahịa na etiti afọ a. Beenbọchị akọwapụtabeghị oge ọ ga-abụ na June. Mana anyị ga-echere ụfọdụ nkwenye site na ụlọ ọrụ na nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei Mate X: Ekwentị mpịachi Huawei na-arụ ọrụ
Etu esi lelee ngosipụta Huawei na MWC19. Huawei Nwunye X?